Habka 1. Sida loo Isticmaalo Wondershare TunesGo Retro (Mac) si ay u gudbiyaan iPad Photos si Mac
Habka 2. Sida loo Isticmaalo iPhoto in Download Photos ka iPad si Mac
Habka 3. Sida loo Isticmaalo Ciidamada Image in aad nuqulka iPad Photos si Mac
Si ay u fududaato in aad nuqulka sawiro ka iPad si Mac, waxaan idinku soo jeedin Wondershare TunesGo Retro (Mac) . Waa iPad in software kala iibsiga sawir Mac, kuu sawiro ka iPad Photo Library iyo Roll Camera wareejiyo Mac, si fudud oo si deg deg ah. Waxaad ku wareejin kartaa dhammaan sawiro ama sawirro xulay sida aad jeceshahay.
Raac tutorial sahlan ku saabsan sida ay u gudbiyaan sawiro iPad si Mac
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan iPad la Mac iyo abuurtaan Wondershare TunesGo Retro (Mac). Ka dib marka aad ogaan karo iPad, software this muujiyaan doonaa info iPad uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2.Transfer sawiro ka iPad Camera Roll / Photo Library si Mac
Daaqadda Photos, guji Roll Camera ama Photo Library dhinaca midig ee suuqa. Markaasaad arki doontaa oo dhan photos badbaadiyey ee Camera Roll ama Photo Library bidixda. Dooro photos doonayay oo guji dhoofinta . Raadi gal ah ku saabsan Mac si loo badbaadiyo sawiradan.
Tallaabada 3. Si loo wareejiyo album sawir si Mac, xaq guji album sawirka, in liiska hoos-hoos u, dooro dhoofinta .
Sidee si ay u gudbiyaan iPad Photos si Mac
Iyadoo iPhoto, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa sawiro iPad si Mac. Raac tallaabada.
Tallaabada 1. Isku aad iPad in aad Mac deeruhu in a cable USB
Tallaabada 2. Codsiga iPhoto ku saabsan Mac Open. iPhoto idin ​​tusiyo photos badbaadiyey ee iPad.
Tallaabada 3. Dooro sawirada aad jeceshahay in aad soo dhoofsadaan. Markaas, guji Import soo xulay .
Tallaabada 4. Marka ay sameeyaan, lagu weydiiyo in aad haddii aad rabto in ay tirtirto ama sii sawiro ka dib dejinta.
Tallaabooyinka hoos ku muujiyaan sida loo isticmaalo Ciidamada Image u wareejinta iPad Photos in aad Mac.
Tallaabada 1. Isku aad iPad si Mac la cable USB ah.
Tallaabada 2. Open codsiga Ciidamada Image aad Mac.
Tallaabada 3. Dooro sawiro aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan in aad Mac.
Tallaabada 4. dooro meesha aad rabto in lagu badbaadiyo sawirrada on your Mac. Markaas, guji Import ama Import All .
Tallaabada 5. Marka sameeyo, waxaad ka arki kartaa sawirada laga keeno calaamadeeyo calaamad jeeg cagaaran.
4 Hababka in ay tirtirto iPad Photos
2 Siyaabaha Copy Photos ka iPhoto in iPad
A Guide Full in aad nuqulka iPhone Photos in iPad
2 Siyaabaha Bedelka iPod Photos in iPad
7 Apps in Edit iPad Photos
Top 5 Apps si ay u gudbiyaan Photo Transfer
Top 5 Apps Camera u iPad
2 Methods si wadaag iPad Music
> Resource > iPad > 3 Hababka si ay u gudbiyaan Photos ka iPad in iMac